Ilay saka British Shorthair | Noti saka
Ny saka Shorthair anglisy
Ny saka Shorthair anglisy Izy io dia karazan-tsarimihetsika tsy mampino: tena be fitiavana, milalao, manan-tsaina, izay manana fahasalamana tena tsara koa. Mahagaga ny fijeriny, ary izy manana maso lehibe afaka manalefaka ny fonao amin'ny fijerena azy ireo fotsiny.
Raha mitady liona an-trano handany fotoana be dia be sy mahafinaritra ianao, ny British Shorthair dia mety ho ilay namana tadiavinao.
1 Fiandohana sy tantaran'ny saka Shorthair anglisy
3 Manao ahoana ny toetranao?
4 Fikarakarana British Shorthair
6 Ohatrinona ny vidin'ny Shorthair Britanika?
6.1 Afaka mahita saka namboarina ve ny saka Shorthair anglisy?
7 Sarina saka saka Shorthair anglisy
Fiandohana sy tantaran'ny saka Shorthair anglisy
Avy amin'ny Fanjakana Mitambatra ny mpiorina antsika voalohany, araka ny anarany; Na izany aza, ny saka saka any Roma no razambeny. Io no karazany anglisy tranainy indrindra, ary iray amin'ireo izay manentana ny fanajana sy fankasitrahana indrindra eo amintsika izay tia saka. Taloha izy io dia nampiasaina hifehezana ny biby mpikiky, saingy vetivety dia nahazo ny fahatokisan'ny olombelona, ​​satria hita fa tena tsy mivadika aminy.
Na izany aza, tamin'ny taonjato faha-XNUMX vao nanomboka ny fiompiana voafantina. Tamin'ny 1871, ny British Harrison Weir, dia nanao fanadihadiana momba ny karazany mifototra amin'ny saka izay naseho voalohany tao amin'ny The Crystal Palace any London. Fampirantiana nahazoany mpankafy maro. Teo no nanovana ny anarany hoe British Shorthair mba tsy hampifangaro azy ireo amin'ny saka tatsinanana na ny Angora.
Nandritra ny Ady Lehibe Faharoa dia efa ho lany tamingana ity karazan-kazo ity mba hamonjy azy ireo dia tsy maintsy nitady olon-kafa izy ireo, toa ny saka Persiana., manandrana mamerina azy. Ireo lakroa ireo dia niafara tamin'ny saka misy boribory kokoa ny lohany, ny tongony mafy orina ary ny loko matanjaka kokoa, ankoatry ny volo lava an'ny persiana. Naharitra an-taonany maro ny fiompiana voafantina mba hamongorana ity toetra farany ity, nanasaraka ny saka fohy britanika tamin'ireo saka efa lava volo.
Ity alika tongotra efatra volo ity, milanja 6 ka hatramin'ny 8 kg, dia biby miavaka amin'ny fananana loha be sy sofina boribory. Ny farany dia misaraka be, ary manana endrika telozoro. Ny maso dia lehibe, misy loko matevina.
Mahery sy matanjaka ny vatany, voaaro amin'ny palitao fohy, matevina ary malefaka izay mety misy loko (fotsy, mainty, manga, mena, tricolor, sôkôla, volafotsy, volamena, lilac, kanelina, volombava, bicolor). Na dia tsara tarehy aza ny karazany rehetra, ny British Shorthair blue sy ny British Shorthair fotsy dia roa amin'ny be fangatahana. Ary tsy natao ho an'ny kely kokoa izany: ny fijeriny, efa manaitra, dia mahatalanjona. Raha tsy mino ahy ianao dia andao hahalala azy ireo bebe kokoa:
Ny saka britanika shorthair manga dia manana ny mampiavaka azy fa manana maso miloko volomboasary tsara tarehy sy mahery izy, izay manome endrika mahafinaritra sy malefaka be.
Sary - Encyclopedia saka saka
Ny saka fotsy shorthair anglisy dia vao mainka mahavariana raha azo atao, satria izy afaka manana maso volomboasary na manga, na iray amin'ny loko tsirairay, ary manana volo fotsy, ny fisehoany dia mahasarika ny sain'ny maro.
Manao ahoana ny toetranao?
Mahafinaritra ny toetran'ity saka sarobidy ity. Izy dia be fitiavana, milalao, falifaly. Tiany ny miaraka amin'ny fianakaviana, na inona na inona taonan'ny mpikambana ao aminy, ary mirona hifanaraka tsara amin'ny biby hafa (alika sy saka) koa izy.
Ny zavatra "ratsy" azontsika lazaina dia izany dia miankina bebe kokoa noho ny saka hafa. Tsy tiany ny mandany fotoana irery, ary raha ny tena izy dia azo inoana fa hiafara amin'ny fanarahana antsika manerana ny trano izy ary tsy te hisaraka amintsika vetivety. Ho an'ny ambiny, saka tsara izy raha manana trano fisaka na trano, satria mifanaraka tsara raha mbola natokana ho azy ny fotoana.
Fikarakarana British Shorthair
Ilay saka shorthair anglisy, toy ny saka rehetra, mila rano madio sy madio, sakafo tsara (tsy misy serealy na vokatra azo avy), ary fanosotra isan'andro hialana amin'ny fananganana ireo natahotra volom-bolo. Fa tsy izany ihany, fa indraindray tsy maintsy hitondra azy any amin'ny vet isika, na hametraka ny vaksiny ilainany castrate / mandrora ary isaky ny miahiahy isika fa marary izy.
Na dia tsy ampy aza izany. Araka ny efa noresahintsika teo aloha, tena ilaina tokoa ny mandany fotoana, milalao miaraka aminy, mijery fahitalavitra miaraka aminy, sns. Mavitrika tokoa izy ary mila mihetsika, manao spaoro. Noho io antony io, raha te ho sambatra sy mendrika ianao dia tokony hanokana fotoana fohy na telo na efatra isan'andro, haharitra 5 minitra eo ho eo. Ao amin'ny magazay biby fiompy dia tsy tambo isaina isika kilalao saka izay hiarahantsika fotoana mahafinaritra.
Na dia karazan-tsakafo tena salama amin'ny ankapobeny aza dia mety misy ireto aretina ireto:
Feline coronavirus: Izy io dia ampitaina amin'ny virus corona izay manafika indrindra ny sela ao amin'ny tsinain'ny saka, ka miteraka gastroenteritis malemy na maharitra.
Feline panleucopeina: aretina viralin'ny aretina azo avy amin'ny parvovirus ity izay manafika ny saka mbola tsy vita vaksiny, ary miteraka soritr'aretina toy ny mandoa sy fivalanana mihosin-dra, tsy fahazotoan-komana ary tazo.
Ny aretim-pivalanana hypertrophic: aretin'ny fototarazo izy io. Mahatonga ny hatevin'ny haben'ny myocardial amin'ny ventricle havia, ka miteraka tsy fahampiana amin'ny rafi-pandehanana.
Aretina voa polycystic: mampiavaka azy ny fisian'ny kista ao amin'ny voa mamehy ny tavy ary manakana ny voa tsy hiasa tsara. Raha manana an'io aretina io ny saka dia hanana soritr'aretina toy ny fahaverezan'ny fahazotoan-komana sy ny lanjany, ny fandoavana, ny tsy fahaizanao mihoa-bidy, ary ny fitomboan'ny fanjifana rano (izay hahatonga ny fivony bebe kokoa).
Ohatrinona ny vidin'ny Shorthair Britanika?
Raha tapa-kevitra ny hahazo alika kely amin'ity karazany mahafinaritra ity ianao dia tsy maintsy tadidinao fa manodidina ny vidiny 500 euros.
Afaka mahita saka namboarina ve ny saka Shorthair anglisy?
Sarotra izany. Ny maha-karazana madio, ary koa mahafatifaty dia mahazatra fa tsy misy fananganana. Saingy tsy midika izany fa tsy ho hita izy ireo. Raha ny marina, raha tena te-hiara-miaina amin'ny saka amin'ity karazany ity ianao, dia mamporisika anao izahay hitsidika na hifandray amin'ireo fikambanana sy toeram-pialofana biby, ary koa ireo kennels ao amin'ny faritra misy anao.
Sarina saka saka Shorthair anglisy
Eto izahay dia mametaka ny sasany:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » Ny saka Shorthair anglisy
Ny vidiny ao anaty trano kennel matotra dia avo kokoa noho ny 500 €, fa ny kalitao dia tsy misy ifandraisany amin'ny zavatra novidina tamin'io vidiny io na ambany. Nofitahin'izy ireo aho ary amidiny ny vidiny $ 450, ny farany tsy anglisy izany (saka volondavenona), narary izy, tsy nisy razamben'ny razambe ... tsy maintsy nampidirina hopitaly ary maty ihany, nanana izahay fotoana tena ratsy. Farany nitodika tany amin'ny sarintany ASFE izahay ary tsara ny zava-drehetra, saka tsara sy salama.
Jose Antonio Campos Gonzalez dia hoy izy:
Aiza no ahazoako zanakavavy british manga azafady misaotra
Valiny tamin'i José Antonio Campos González
Salama José Antonio.
Manoro hevitra anao izahay hanontany any amin'ny tobim-pahasalamana ho an'ny biby. Angamba afaka manampy anao izy ireo.
Coronavirus sy saka: azony atao ve ny mamindra ny aretina aminao?
Scottish Fold, ilay saka misy fijery mamy